U dir lacag caalamka | Resources oo ka tirsan xarunta Qaxootiga Online | Refugee Center Online
Waa ay fududahay in lacag si qof oo ku nool dalalka kale ee soo diri. Waxaa jira dhowr siyaabood oo ammaan ah oo degdeg ah si ay lacag u soo diri caalamka. Baro sida in ay lacag si ay dalalka kale ee soo diro si deg deg ah iyo si ammaan ah.
U dir lacag Gram ama WalMart2World
Money Gram iyo WalMart2World yihiin adeegyada xawaaladda waxaad isticmaali kartaa. Waxay labada shaqeeyaan dhowaad dhammaan dalalka dunida.
Si aad u soo dirto lacag caddaan ah iyada oo loo marayo Gram ama WalMart2World, waa inaad marka hore la helo meel ay ka shaqeeyaan. WalMart2World waa in dhammaan dukaamada Walmart. goobaha Gram yihiin dukaamada, dukaamada, iyo saldhigyada gaaska. Waa inaad keentaa aqoonsi iyo lacag caddaan ah. Oo ma aad awooddid inaad isticmaasho credit ama debit card.
| Raadi meesha Gram kuu dhow
| Raadi meesha Walmart kuu dhow
Haddii aad rabto in aad soo dirto iyada oo xisaab bangi, waxaad isticmaali kartaa adeeg online WalMart2World ee. Waxaa lagu weydiin doonaa in aad marka hore si ay u abuuraan xisaab online.Iyada oo WalMart2World, lacagta gaaray daqiiqo iyo lacagta ajuurada oo hoose. ajuurada waa qadar go'an, ama "lacag guri." Money Gram iyo wax yar ka qaalisan oo gaabis ah. Laakiin waa ikhtiyaar fiican haddii aadan awoodin in ay u safraan Walmart a.
ka bangi dir lacag caalamka
Haddii aad inta badan lacag u dirto caalamka, waxaa fiican in la isticmaalo xisaab bangi. ILAALI badan oo lacag caddaan ah ee gurigaaga ammaan ma aha ee USA. Waxaa fiican in la furto xisaab bangi. Baro bangiyada iyo sida ay u furatid xisaab bangi.
Halkan waxaa ku qoran waxa aad u baahan tahay in la ogaado in lacagta caalamka ka bangigaaga soo diri:
Ka hor inta aadan lacag u dirto, aad u baahan tahay warbixin ku saabsan qofka la lacagta. Baanka ayaa ku baaqay in qofkani ku qaataha. bangiga wuxuu ku weydiin doonaa magaca qaataha ee, lambarka xisaabta bangiga, iyo mararka qaarkood cinwaanka ay.
Waayo, qaar ka mid ah dalalka, waxaad u baahan doontaa lambar aqoonsi bangi. Kuwani waa IBANs (International Bank Account Number) ama lambarada deg deg ah / BIC. Waa in qofka qaata lacagta waydiiyaan bangiga haddii aad u baahan doontaa tirada this.
Inta badan, waxaad ku diri kartaa xisaabtaada bangiga online. Haddii aad u baahan tahay caawimaad ama aanad hubin waxa uu fursadaha jira, tag bangiga. Waxaad la hadli kartaa shaqaalaha ee suuqa kala soo dhaweynta iyo waxay kaa caawin doona.
Banks idinku dhaarinayaa doonaa lacag caalamka diraya. Hubi si aad u weydiiso oo ku saabsan kharashka (inta ay ku kici doona).
Diraya lacagta caalamka iyada oo bangiga noqon kartaa gaabis ah, aad.
U dir lacag la Western Union
Western Union waa shirkadda adeegyada maaliyadeed. lacag kuu soo diri kara iyada oo ay website ama app casriga ah ay. Waxaad u baahan doontaa xisaab bangi si aad lacag online diri. Waxay sidoo kale kaa qaadi doonaa lacag. Haddii aanad lahayn xisaab bangi, waxaad weli lacagta u diri kartaa caalami ah iyada oo loo marayo Western Union. Waxaad tegi kartaa laan degaanka.
| lacag soo dir online dhex Western Union
| Raadi goobaha Western Union kuu dhow
At laan degaanka, Western Union, waxaad ku bixin kartaa lacag caddaan ah. Tani waxay sidoo kale waa xulasho wanaagsan haddii qofka aad lacag soo diray ma laha xisaab bangi. Haddii aad qaadato ayaa laan Western Union iyaga dhow, waxay awoodaan in ay qaado lacagta halkii ay noqon doontaa. Waxaad u baahan doontaa:
Waxaa magaca qaataha ayaa sida ay u muuqato ay ID dowladda-soo saaray
magaalada aad qaadato ama magaalada, gobolka ama gobolka, iyo dalka
Your ID dowladda-soo saaray
U dir lacag Xoom iyo Paypal
Nidaamka ugu caansan ee bedelaada lacagta caalamiga ah ee internetka ama casriga ah waa Xoom. Iyada oo Xoom, aad lacag caalamka in dheeraad ah u diri kartaa 100 boqol dalalka iyo gobollada. Qiimaha lacagta diraya iyada oo loo marayo isbedel Xoom. Mararka qaarkood waa lacag go'an. Mararka qaarkood waxay ka qaadaan boqolkiiba. Waxaad u baahan doontaa in ay galaan faahfaahinta akoonka bangiga inaad lacag u dirto. Waxaad sidoo kale u baahan doonaa faahfaahinta qofka aad diraya.
Xoom ayaa goobaha laga qaadayo, taas oo macnaheedu yahay in aad lacagta u diri kartaa oo qof ka qaadan kartaa in lacag caddaan ah dhamaadka kale. Mararka qaarkood, qofka aad diraya in ay ka qaadan kartaa dhowr saacadood. Waayo, qaar ka mid ah dalalka, aad lacag caddaan ah si ay xisaab bangi soo diri kartaa. Haddii aad soo diraya in ay xisaab bangi, waxaad u baahan doontaa in macluumaadka, aad.
| Fur account Xoom a
| Eeg liiska dalalka halkaas oo Xoom shaqeeya
| Baro oo ku saabsan kharashka Xoom
Haddii aad qabto smartphone a, aad kala soo bixi kartaa app Xoom ah. Markaas waxaad isticmaali kartaa Xoom inaad lacag u dirto on your phone.
Xoom tahay oo keliya lacag inay dadka diraya. Haddii aad rabto in aad lacag si ay ganacsi u soo diri, waxaad ku diri kartaa PayPal. Paypal leh Xoom.
Siyaabo kale inaad lacag u dirto
Waxaad jeeg ka xisaabtaada bangiga diri kartaa. Laakiin qaar ka mid ah dalalka ka dhigi aad u adag si aad u hesho jeegag shisheeye. bangiyada Dibadda dallaci doonaa lacag aad u weyn si ay u aamino.
si lacag A la mid tahay jeeg, laakiin waa pre-ansixiyey iyo lacag. Taas macnaheedu waa in magaca qaataha iyo macluumaad horeba waa on warqad iyo aan la beddeli karin. An kharashka caalamka money order $8. 55 waayo, qiyamka ilaa $700 ($500 waayo, El Salvador iyo Guyana). Waxaad ka heli kartaa jeega bangiyada, xafiiska boostada, iyo dukaamada qaar ka mid ah. Waxaad badan oo ku saabsan baran kartaa lacag amar caalami ah oo ka socda adeegga Maraykanka boostada.
Waa maxay ujrada?
Marka aad lacagta caalamka soo diri, lagaa qaadi doonaa fiiga.
ajuurada Transfer waa lacagta aad bixiso lacagta diraya. Waxaa laga yaabaa inay boqolkiiba lacagta kuu soo diri ama waxaa laga yaabaa in lacag go'an
ajuurada heerka Exchange
heerka sarrifka yihiin tiro ka mid ah lacagta (sida doolarka Maraykanka) waxaa haboon in lacagta kale (sida Euros). heerka The beddelo waqtiga oo dhan. Mararka qaarkood waxaad bixisaa lacagta sarrifka ah iyo sidoo kale lacag la bixiyo lacagta diraya. bangiga ama adeeg Weydii inay sharxaan khidmadaha ay.
Waxyaabaha si ay u daawadaan, waayo, markii lacagtii diraya caalamka
Sidee kharashka barbardhigi: fiiri oo dhan kharashka. Waa in aad lacag.
Waqtiga dirida: Had iyo jeer hubi inaad ogaataan sida dheer kala iibsiga qaadan doonaa. Haddii aad lacag u soo diro xaalad degdeg ah, Western Union, Xoom, ama Walmart2World laga yaabaa in xulashada ugu fiican.
faahfaahinta akoonka: marka diraya lacagta la isticmaalayo Lambarrada akoonnada iyo isdaba, iyaga hubiyo dhowr jeer. Haddii aysan ahayn mid sax ah, lacagta waxaa ma heli doono.